Omar Sayid Abdilahi: 2017
Jawaabtii Madaxwenyaha Galmudug ee Xaaf
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 12:54 AM No comments:
Hayaankii Siyaasada Iyo Ololaha Xisbiga Kulmiye
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 3:09 AM No comments:
Safaradii Borama iyo Djibouti
Maalintii Bisha August ay ahayd 13 sanadka 2017 waxaan safar shaqo ku tagay, markii koowaad dalka Jabouti, aniga oo ku maqnaa mudo 3 cisho ah oo aaan hawlaha wasaarada waday gaar ahaan mashruuc lagu samaynayo waax casri ah oo ka shaqayn doontaa saadaasha hawada oo ay naga maal galisay urur goboleedka IGAD.
Waxa aan Jabootu ku Kulanay xisaabiyaha guud ee wasaarda madaxtooyada Mr muxiyadiin tilaabo oo runtii ah wiil dhalinyaro ah oo firfircoon, aniga saaxiib gaar ah aaanu nahay, aniga iyo muxiyadii wakhti fiican ayana ku qaadanay Jabouti, waxa isaguna si la yaab leh ii soo dhaweeyay Safiirka . Somaliland u fadhiya Dalka Jabouti Mr Abdifataax.
Sidoo kale waxa casuumad sharaf noo sameeyay Cabdilaahi Abu site, oo nagu casuumay Hotel sheraton oo bada dhinaceeda ku yaala.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 9:29 AM No comments:
Kulankii NDP2 iyo shir Jaraaid
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:18 PM No comments:
Kaadh Qaadashadii Iyo Kormeerkii Kulmiye
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 3:41 AM No comments:
Air Arabia Safely landed Hargeisa Airport
Today, on 4 July 2017 6:00 AM Air Arabia safely landed Hargeisa International Airport ( EGAL ).
The UAE second flag carrier airline will operate twice a week between Sharjah - Hargeisa.
Small ceremony held inside the airport with the present of Vice president of the Republic H.E Abdirahman Abdilahi Ismail and several other ministers of somaliland government along with other guests including air Arabia delegation .
It is an other milestone achievement which MoCAAT realized in a short period.
I have participated the welcoming event and the ceremony with huge courage and commitment.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:39 AM No comments:
Xafladii Xil Wareejinta Labada Wasiiru Dawle ee W. Duulista
Maalintii Salaasada ee Bisha June ay ahayd 13 sanadka 2017, Waxa Xarunta Wasaarada Duulista lagu qabtay xaflad xil wareejin ah oo ay xilka kula kala wareegayaan wasiiru dawlihii hore ee Wasaarada Duulista Ahmed Nur faahiye, iyo Wasiiru dawlaha cusub ee Wasaarada Ahmed Baynax.
Waxay ahayd xaflad qurux badan, si gaar aahaaneed dareen aniga igu leh waayo wasiirka la badalay oo ah wasiir aad iyo aad aanu saaxiib u ahayn oo aanu mudo soo wada shaqaynay.
Waxaan halkaas ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, oo aan kaga hadlay arimo fara badan.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 12:57 AM No comments:
7 years After, I went back to India
On 29 May 2010, finally i say by by to India after four years of higher education in Aurangabad City.
On 26 May 2017, it is memorable time
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 11:24 AM No comments:
7 Sano ka dib iyo ku soo noqodkaygii Wadanka Hindiya
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:20 AM No comments:
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 2:02 PM No comments:
Waxaaan 24 April Safar siyaasadeed ku tagay degmada Borama, waxaana safarkaas hogaamiyaya gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Mudane muse bixi cabdi.
Wuxu ahaa runtii safar siyaasadeed muhiim u ah xisbiga Kulmiye iyo sidoo kale kaygaba, waxaana war been abuur ka qoray saxaaafada qaar oo u adeegta xisbiyada Mucaaradka ah.
Waxa safarka igu wehelinayay dhalinyaro xilal kala duwan ka haysa Xisbiga Kulmiye iyo Aqoonyahan Maxamed Cali Bile, waxaanu u hoyanay hal habeen.
Waxa safarka Weeraro siyaasadeed oo aan waxba la isula hadhin ku dhex mareen Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Muse Biixi Cabdi oo maalintii Kowaad Weerarka bilaabay, xafladii ay dhlainyara Borama ugu biirayeen Xisbiga Kulmiye, iyo maalintii labaad oo uu jawaab ka bixiyay Hogaamiyaha Xisbiga Wadani, oo isna ka hadlayay Xaflada furitaanka Kaadh qaadashada doorashada Somaliland.
Gudoomiye Biixi waa waayo arag,suugaan yahan ah oo dadka markuu hor joogo wax sheegi kara, dad cusubna kasban kara.
09. May waxaan iyadana safar shakhsi ah ku tagay Magaalada Addis Ababa, oo aan ka doontay Vise aan ku tago dalka Hindia.
Alxamduilah, ilaahay ayaa ii suuro galiyay inaan si dhib yar ku helo Visaha India, sidoo kale Xaaskayga oo safarka igu wehelin doonta iyadana waxa aan Visa uga soo qaaday dalka Kenya.
Safarka Addis dad badan oo masuuliyiin ah ayaan ku kulanay, oo sheeko wadaag aanu yeeelanay.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:11 AM No comments:
Maalinimadii Jimcaha ee Bishu ahayd 19 May, Waxaan ka qayb galay barnaamijka dunida iyo maanta ee Laanta afsomaliga ee Idaacada BBC.
Barnaamiskaas oo lagu soo bandhigay dood ku saabsan maamulka hawada ee Somalia & Somaliland.
Waxay ahayd dood runtii ay ka muquurteen dhinacii naga soo horjeeday, oo aanu kali ku ahayn, taas badalkeeda waxa dooda ku jiray niman khubaro sheeganayay oo dhinac u xaglinayay oo marna aan runta ka sheegayn meesha sartu ka qudhuntay.
waxay ahayd dood wasaarada duulista iyo qaranka somaliland guul ka soo hoyeen.
Waxa mahad gaar ah leh, wariye axmed Siciid cige oo runtii aad iyo aad u jeclaa inaan doodaa guul kala hoyano.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:10 AM No comments:
Wasiir Samsam Oo Kormeertay Riigga Banka Qool Caday iyo hadal aan ka jeediyay
24.03.2017, waxaanu booqasho ku tagnay riiga banka qoolcaday, aniga iyo agaasimaha wasaarada ciyaaraha maxamed dhabeeye, oo ay na weheliyaan wasiiirka wasaarada Maaliyada JSL iyo Wasiiru dawlaha Wasaarada Madaxtooyada JSL.
Waxa halkaas aan ku gudoonsiiyay maamulka degmada salaxlay, baco loogu talo galay inay xooluhu ka galaan roobka iyo bacaha biyaha lagu kaydiyo iyo xoogaa dawooyin iyo cunto bisil ah.
Waxay ahayd booqasho nooceedu ku yaraa degaanka, wasiirka maaliyaduna degmada salaxlay aad iyo aad ayay runtii u tixgalisaaa oo ay mar walba hawlada degmada u siisaa mudnaanta.
Waaan u mahad naqayaa wasiirka iyo wasaaradeedaba.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:29 AM No comments:
Agaasime Cumar Sayid oo Shirkada Fly Dubia ka Gudoomay Budada Dabka Diya...
Maalinta oo ay taariikhdu tahay 22.03.2017, waxaan xadhiga ka jaray xafiis cusub oo shirkada Fly dubai, ka furatay badhtamaha Hargeisa, sidoo kale waxa shirkadu ay nagu wareejisay, xumbada diyaaraha bakhtiisa, nooca loo yaqaan AFFF 3% oo aan hore somaliland u oolin.
Waxay ahayd runti talaabo wanaagsan oo horumar wayn u ah guud ahaan wasaarada duulista hawada iyo gadiidka cirka JSL, gaar ahaana madaarka caalamiga ah ee EGAL international Airport.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 5:00 AM No comments:
Booqashadii Riiga Banka Qoolcaday
Maalintii Taariikdhu ahayd 20/03/2017, waxaanu booqasho ku tagnay riiga laga hirgaliyay banka qoolcaday.
Waxaan weerar toos ah ku qaaday, xildhibaano iyo ashkhaas kale oo runtii hagar daamo iyo dhib wayn u gaystay mashruucan, islamarkaana ay iskaga khaldan tahay siyaasadii iyo horumarkii.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 11:20 PM No comments:
Maalintaa leh taariikhda kor ku xusan, waxaan jawaab cad oo adag aan siiyay wasiirkii hore ee gaadiidka Dawlada somalia Mr jangali, oo tiraba dhawr jeer ku celceliyay in lagu wareejinay hawada somalia oo dhan, isaga oo aan wax awood ah u lahayn, sidoo kale wasiirku wuxu ahaa ninkii hor istaagay inu fuliyo heshiiskii aanu wada galnay.
wuxuu ahaa waraysi qiimo badan .
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 11:56 AM No comments:
Habayntii Tagaasida iyo Iskaashigii Dawlada Hoose
Maalintii salaasada ee bishu ahay d07/02/2017, waxaanu soo bandhignay barnaamiji habayn iyo cashuur ururin isugu jira oo aanu iska kaashanay dawlada hoose ee hargeisa.
Barnaamijkaas oo ahaa mid sare loogu qaadayay adeega, iyo amniga guud ahaan shacbiga ku dhaqan caasimada hargesa, waxa bar bar socotay in xogyaha dawlada hoose aanu si dhaw uga balay in la dardar galiyo oo laga hawl galo dhamaystirka bixinta dhul celiskii ay dawlada hoose balan qaaaday, ee la siinayay dadkii dhulkoodu galay xadaynta madaarka caasimada.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 11:32 PM No comments:
Maalintii bisha Janaury ahayd 11 sanadka Cusub ee 2017, waxaanu safar dacwad diineed ah ugu baxnay dalka Bangaladesh aniga iyo Agaasimaha Wasaarada Ciyaaraha iyo dhalinyarada Maxamed Dhabeeye iyo Agaasime Muse Ibrahim Yusuf Selef, waxaananu ka qayb galnay Ijtimaaca diineed ee loo yaqaan Tonggi oo dhawr kii sanaba mar lagu qabto caasimada Bagaladesh ee Dhakha.
Waxa ka soo qayb galay sanadkan 4 million oo qof, Somaliduna waxay ahayd ugu yaraan 300 qof.
Waxa kale oo safarka nagu wehelinayay Ismaciil cagawayne ( Amiirka) iyo Aabi Xujaale iyo Kamsaro Qayo iyo Shekh Ismaaciil , Sheekha Jamacaada Tabliiqiyiinta.
Aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay inaan ilaahay dartii u baxay mudo 12 cisho ah.
Wuxuu ahaa safar noloshayda insha alaah wax badan ka badali doona, oo xaga ilaahay ii dhawayn doona insh alaaahu.
Bangaladesh waa dal yar oo muslim ah oo dhibaatooyin badan soo mareen, hadana ku sugan, laakin dadkiisu culimada iyo diinta ay aad u jecel yihiin.
Markaan madaarka Ka soo dhoofayay waxaan soo iibsaday Buug lagu magacaabo The last days of United Bakistan.
Buugaas oo uu qoray nin wasiir ka ahaa labadii jamhuuriyadood ee isku jiray ee Eas pakistan ( Bangaladhesh) iyo West pakistan oo ah Dawlada pakistan ee hada jirta.
Wuxuu si qoto dheer uga waramayaa labadaas dal, sidii ay u midoobeen, dhibootooiyinkiii soo baxay markii la midoobay, sidii loo kala gurtay, faragalintii wadamada shisheeye ee India ugu horayso iyo macluumaad badan oo kale.
Waxaanu Hargeisa ku soo noqotay 23 Bisha maalin Isniin ah .
N:B Maadaama uu ahaa safar diineed Wax sawir ah maanu iska qaadin.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 9:30 PM No comments:
Qalin Jabintii Jamacada Togdheer, iyo Safarkii Adk...
Xafladii Xil Wareejinta Labada Wasiiru Dawle ee W....
Wasiir Samsam Oo Kormeertay Riigga Banka Qool Cada...
Agaasime Cumar Sayid oo Shirkada Fly Dubia ka Gudo...